सुनको मुल्यमा नयाँ रेकर्ड! | Dinesh Khabar
सुनको मुल्यमा नयाँ रेकर्ड!
२०७६ फाल्गुन १२, ०४:४८
अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा परेको छ । पहेँलो धातु सुनको मूल्य वृद्धि सँगै नयाँ रेकर्डसमेत कायम भएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज नेपाली बजारमा छापावाल सुनमा मात्रै प्रतितोला एक हजार ५०० ले वृद्धि भएको छ। स्थानीय बजारमा सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला ८० हजार ३०० मा कारोबारभई नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो।
आइतबार छापावाला सुन ७८ हजार ८०० मा कारोबार भएको थियो। यो आइतबारको तुलनामा एक हजार ५०० ले बढी हो। यस्तै तेजावी सुन प्रतितोला ८० हजारमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार यो प्रतितोला ७८ हजार ५०० मा कारोबार भएको थियो।
चाँदीको मूल्य भने आइतबार प्रतितोला ९२० मा कारोबार भएकोमा सोमबार प्रतितोला ९२५ मा कारोबार भइरहेको छ। –रासस
२०७६ चैत्र १९, ०७:४६
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य १० रूपैयाँ घटाएर प्रतिलिटर ९६ रूपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघि १०६ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा पेट्रोल बिक्री हुँदै आइरहेको थियो। … विस्तृतमा
२०७६ चैत्र १९, ०६:४२
खाद्य र राहत वितरणमा मापदण्ड
लकडाउनका अवधिमा वितरण गरिने खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्बन्धी राहत सामग्री वितरणमा मापदण्ड बनाइने भएको छ। घरमै सीमित हुुने आदेशका कारण दैनिक आय गरी जीवनयापन गर्ने तथा विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई … विस्तृतमा
२०७६ चैत्र १९, १२:५०
सुदूरपश्चिम सरकारको कोरोना जोखिम नियन्त्रण कोषमा ४० करोड २७ लाख जम्मा
सुदूरपश्चिम सरकारले खडा गरेको कोरोना भाईरस जोखिम नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापन कोषमा ४० करोड २७ लाख १६ हजार पाँच सय ५१ रुपैँया जम्मा भएको छ। कोषमा प्रदेश सरकारको ४० करोड समेत गरी हाल सम्म उक्त … विस्तृतमा